मोडल अन्जलि अधिकारीको स्टुड्योमै रुवावासी, किन आउछिन सधै बिबादमा ? यस्तो रहिछ वास्तविकता (भिडियोसहित) - Facebook Khabar
मोडल अन्जलि अधिकारीको स्टुड्योमै रुवावासी, किन आउछिन सधै बिबादमा ? यस्तो रहिछ वास्तविकता (भिडियोसहित)
कलाकारहरुको जीवन वाहिर हेर्दा निकै राम्रो देखिन्छ । उनीहरु हाँसीखुसी देखिन्छन् । तर भित्रि कथा भने अर्कै हुन्छ । यस्तै वारम्बार समस्यामा पर्ने कलाकार हुन् अञ्जली अधिकारी ।
आफ्नो कलाका क्रममा यस्ता वास्तविकता पोख्न नपाएपनि साक्षात्कारहरुमा भने उनीहरुले आफु माथि परेका समस्या सुनाउने गरेका छन् । आफुहरुले भोगेका संघर्षका कथाहरुले उनीहरुको आँखा पनि रसाउँछ ।
पछिल्लो पुस्ताकी निकै चर्चित कलाकार हुन् अञ्जली अधिकारी । उनी लोकसंगीतमा मोडलका रुपमा धेरै चर्चित छन् । सोचे झैं जिन्दगी रैनछ मा निकै राम्रो नृत्य गरेसंगै अञ्जलीको हाइट थप बढ्यो ।
अञ्जली गायक प्रकाश सपुतका गीतमा धेरै देखिने मोडल हुन् । प्रकाश सपुतले नै अञ्जलीलाई कलाकारीतामा ल्याएको भनिन्छ । तर उनले बद्रि पंगेनीको गीतवाट कलाकारीता सुरु गरेको भएपनि प्रकाश सपुतको बोल माया गीतवाट उनले आफ्नो उचाई बढाएकी हुन् ।
तर पछिल्लो समय प्रकाश सपुतको गीतमा अञ्जली नआएको देखिएका कारण उनीहरुबीचमा केही खटपट परेको हो की भन्ने आशंका गरिएको छ । उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अनफ्रेण्ड पनि गरिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यो कुरा उनले अस्वीकार गरिन् ।